About Us - Better Version
December 2, 2019 2021-06-17 17:37
About Better Version
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လူတစ်ယောက် မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ပိုပြီး ကောင်းလာတဲ့ ပုံစံ၊ အခြေအနေမျိုးကို တော့ ဖန်တီးနိုင်တယ်။ အဲဒါဟာ Better Version ရဲ့ ခံယူချက်ဖြစ်ပါတယ်။
မာကက်တင်း ဘာသာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက ဒီပညာရပ်အကြောင်းကို လေ့လာလိုက်စားခဲ့ပါတယ်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သင်တန်းတွေတွက်၊ အွန်လိုင်း သင်တန်းများ အပြင် Self-study အနေနဲ့ စာအုပ်များစွာ ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့တယ်။
ကိုယ်တိုင် လုပ်ငန်းတွေကိုတည်ထောင်ရင်း၊ သင်ယူရင်း၊ လုပ်ကိုင်းရင်း နဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကို အကြံပေးတာမျိုးတွေလုပ်ရင်းနဲ့ တစ်ယောက်ချင်းစီကို ပြောပြအကြံပေးနေတာမျိုးထက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ တခြားသော လူတွေကိုပါ ကူညီပေးနိုင်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီး Better Version ကစတင်လိုက်တယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ Sales & Marketing ပိုင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သင်တန်းတွေကို ဦးစားပေးဖွင့်လှစ်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ စီးပွားရေးတိုင်း၊ လူတိုင်းအတွက် သူတို့ရဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ ပုံစံ Better Version ကို ရယူနိုင်ဖို့ တခြားသော သင်တန်းများကိုဖွင့်လှစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Grow Your Business & Carrer
သင့်လုပ်ငန်းနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ ရလာဒ်ကောင်းများ နဲ့ တိုးတက်လာလာစေဖို့။
အဆင်ပြေတဲ့အချိန်၊ အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာ ကြိုက်သလို လေ့လာသင်ယူနိုင်တယ်။
You areapractitioner, our classes are practical
လက်တွေ့လုပ်မှ တိုးတက်မှာ ဖြစ်လို့ လက်တွေ့ကျတဲ့ သင်ခန်းစာများ
Bi-lingual Lessons (English & Burmese)
သင်တန်းစာတိုင်းကို မြန်မာလိုရော English လိုပါ ထည့်သွင်းသင်ကြားလို့ ဘာသာစကား အခက်အခဲအတွက် အဆင်ပြေတယ်။
Brands Trust Us And Working With Better Version
Bagan Life Sciences
Lluvia (ဒုံးပျံ ဂျုံမှုန့်)
Kyaw Kyaw Shwe Than Lwin
Myanmar Lift Group
Chef’s Choice Tablewares
Moe Ah San Animal Health Products
SWORD Elevator Myanmar
I personally attended Sayar Ko Min’s Digital Marketing Strategy on 26 & 27th of July 2018. He isagreat trainer who knows exactly what the attendees need in the real lives and conducted the training effectively for the trainees. He taught as much everything as he could in that two days covering all the important points and concluded with the very important message to focus on Strategy. I would highly recommend him to all the organization, business owners, professionals and staffs I know. His dedicated contributions will beavaluable asset to the success of every organization..
Founder, Managing Director of Beyond Boundaries Myanmar
I just met Saya Min at Marketing for Hospitality & Tourism Batch(III) who hasafresh and engaging style. I appreciated all of the service marketing & sales tips as well as you sharing your personal experiences. I feel that the course provided me with the knowledge and confidence to make genuine improvements for my job. His depth of knowledge across all areas of Marketing platform is impressive and I would highly recommend his training.
Perfect salemale တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် basic ကစပြီး professional ဖြစ်ဖို့အထိ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကို သင်တန်းတက်နေရသလိုကြီး မဟုတ်ဘဲ games တွေ Activities တွေနဲ့ သင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အရမ်းပျော်စရာကောင်းပါတယ်! Selling skills အပြင် အခြားပြင်ပဗဟုသုတတွေလည်းသိခဲ့ရတဲ့အတွက် တကယ့်ကိုအကျိုးရှိတဲ့သင်တန်းလေးပါ. *****
Hnin Oo Yin
I amastudent from strategic sales management two days class. I really enjoyed Sayar Min teaching method because it diverges from normal boring sitting class. All of the lectures can suddenly apply on practical. It worth to invest your time to extend knowledge and new ideas.
Khine Thu Thu Khant
Sales သမားတစ်ယောက်အတွက် ဘာတွေလိုအပ်တယ် ဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်သင့်လဲ ဆိုတာတွေကို အကုန်လုံးကို ဆရာသင်တန်းတက်ပြီး အကုန်သိခွင့်ရခဲ့တယ် sale နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပညာတွေအများကြီးရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ Saw Taw Gler Moo, Digital Marketing Executives, SUN Mobile If You want to beaSuccessful Sales Person, You should take Sayar Min Than Htut's Trainings.
ဆရာ ရဲ့ profession selling skills သင်တန်းကို တတ်ပီးတဲ့ နောက်မှာ saleman တစ်ယောက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းများကိုပိုမို သိရှိနားလည်စေတဲ့အပြင် လိုအပ်တဲ့အရောင်းဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက်မှာ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် များကိုလည်း သိရှိနားလည်ခဲ့ရပါတယ် ဆရာ ကျေးဇူးပါဆရာ နောက်ထပ်သင်တန်းများလည်း ထပ်တတ်ချင်ပါတယ်ရှင်။
Ei Ei Hmwe
Operation Manager, Bagan Hmwe Hotel
U Min Than Htut